Taliska Booliska oo dafiray in Ciidamada Dowladda ku dagaalameen Muqdisho | Dhacdo
Home Wararka Maanta Taliska Booliska oo dafiray in Ciidamada Dowladda ku dagaalameen Muqdisho
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa ka hadlay dagaalka saakay ka dhacay Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Afhayeenka ayaa sheegay in dagaalka uu u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed, ka dib muran ka dhashay sida uu yiri lahaanshiyaha dhuleed, waxa uu intaa ku daray in Ciidamada Booliska ay kala dhexgaleen maleeshiyadaasi, isla-markaana ay la wareegeen goobtii lagu dagaalamay.
Afhayeenka ayaa xusay in Maxkamadda Gobolka Banaadir ay la wareegtay dhulkaasi, si loo caddeeyo milkiyaddiisa cidda iska leh.
“Labadii maleeshiyo beeleed ee dhulka isku haysatay waxaa dhexgalay Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo la wareegay goobtii, dhulkana sida aan warbixinta ku heleyno waxaa xaaladiisa ku jira Maxkamadda Gobolka Banaadir, oo ayada la wareegi doonta sharciyadda dhulka iyo sidii loo kala saari lahaa milkiyadda dhulkaba.” Ayuu yiri Afhayeenka oo Warbaahinta la hadlay.
Waxa kaloo uu yiri “Illaa amar dambe hadda waxaa gacanta ku haya Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, si loo suggo ammaanka goobta uu ku yaalo dhulkaasi iyo dadweynaha ku ag ganacsanayaba.”
Cabdifitaax Aadan Xasan, Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay in Taliyihii Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad, Cabdixamiid Cabdullaahi Maxamed (Fanax) uu ku dhaawacmay dagaalka, kaasoo xaaladiisa lagula tacaalayo goobaha caafimaadka.
Marka laga soo taggo hadalka Afhayeenka Booliska, Warbaahinta ayaa fahamsan in dagaalkaasi uu u dhaxeeyay Booliska Haramcad iyo ciidamo militari, oo ka amar-qaata Saraakiil lagu kala magacaabo Faarax Xasan Xaashi iyo Liibaan Madaxweyne.
Booliska Haramcad ayaa gaadiidka dagaalka ku gooyay Isgoyska Banaadir illaa waddada Zoobe, iyadoona uu hakad ku jiro isku socodkii gaadiidka. Dagaalka ayaa sidoo kale saamayn ku yeeshay goobaha ganacsiga ee halkaasi ku yaala.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay dagaalka Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir
Next articleRooble oo war ka soo saaray shaqo joojintii Madaxweynaha